XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya dacwad lagu soo oogay? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya dacwad...
XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya dacwad lagu soo oogay?
Nairobi (Halqaran.com) – Shirkad qaabilsan dhanka dhismaha oo laga leeyahay Kenya ayaa Dacwad ku soo oogaysa Safaaradda Soomaaliya ee dalkaas.
Sida uu baahiyay Waregeyska The eastafrican, Shirkadda Kingsley ayaa sheegaynaysa in lacag ka badan $200 Milyan oo Doollarka Mareykanka ah ku leedahay safaaradda kaddib markii ay dayactir ku sameysay.
Sidoo kale shirkadda ayaa sheegatay In heshiiska dayactirka dhismaha safaaradda iyo guriga Lower Kabete oo ay Dowladda Soomaaliya ku leedahay Nairobi heshiiskeeda saxiixday sanadkii 2016-kii.
Dacwadda lagu soo oogayo Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa timid kadib markii mid ka mid ah shaqaalaha sharikaddaas uu safaaradda tagay isaga oo Dukumiintiyo la xiriirka kiiska dacwadda ka soo dhameynayay uu ku dooday in la xiray lana jirdilay.
Balse safiirka Dowladda Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed nuur (Tarsan), ayaa beeniyay eedeha loo jeediyay,wuxuuna sheegay in uusan jirin qof la jirdilay ama la xiray isaga oo xusay in safaaraddo aysan lahayn qolal wax lagu xiro.
dacwad lagu soo oogay
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya